कसरी घर मा lashes हटाउन?
बाल्यकाल coyly सक्षम देखि निष्पक्ष सेक्स को सबै अग्ले GenericName गर्न केटाहरु, त्यसपछि केटाहरू, र पछि मानिसहरू। Innocently flapping परेलाहरु सामान्यतया हल्का पखेटा आकर्षक पुतली संग जवान मान्छे मा सम्बन्धित छन्। त्यो किन आँखा लगभग कुनै पनि क्षमा gazelle तयार जनावरहरूलाई पनि सबैभन्दा extravagant whims छ। तर, दुर्भाग्य, सबै महिला, लामो फ्लफी र बाङ्गो परेलाहरु संग जन्म हुन भाग्यशाली छैन। यस मामला मा, तपाईं एक विशेष काजल को मद्दत गर्न प्रभाव लामो पार्नू, तपाईं खरिद गर्न सक्नुहुन्छ Resort सक्नुहुन्छ झूटा परेलाहरु। तर अब यो अधिक लोकप्रिय प्रविधि परेला बन्दैछ।
यसलाई आफ्नै प्राकृतिक परेलाहरु विशेष गोंद संग सौंदर्य सैलून मा मालिकको नेत्रहीन वास्तविक कुरा हो, परिमाण अब मात्र आदेश जस्तो कि, कृत्रिम संलग्न भन्ने तथ्यलाई मा निहित। यस्तो सौन्दर्य बारेमा एक महिना लागि सामान्यतया, आयोजित छ र लागत सस्तो छैन। पछि त्यो कस्तो थियो जीवन, त्यसैले painstakingly पहिले संलग्न थिए सबै, हामी गोली छ, र यो त थियो, र त्यहाँ एक बुझ्ने प्रश्न छ। सबैलाई कसरी हटाउन थाह झूटा परेलाहरु। कसरी Naroscheny सबैले थाह हटाउन। यो प्रक्रिया एक पेशेवर सैलून मा गर्न सकिन्छ, वा घर मा। मात्र, यो के मतलब जान्नु आवश्यक आँखा वरिपरि संवेदनशील छाला, साथै खोपडी शताब्दीको स्वास्थ्य हानी छैन ताकि तपाईं, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ दुवै हटाउन धेरै तरिकाहरू छन् lashes। का सबैभन्दा किफायती र सरल प्रविधि केही हेरौं।
कसरी तेल मद्दत संग घर मा lashes हटाउन
आँखा संग कृत्रिम hairs छुटकारा रही लागि मुख्य समस्या ठीक सबैभन्दा सुरक्षित समाधान को कुरा हुनुपर्छ जो एउटै टास्ने संरचना छ। र यो प्रक्रिया को लागि सबै भन्दा प्रभावकारी माध्यम को एक वनस्पति तेल छ। यसको तेल बनावट तपाईं टास्ने भंग गर्न र रोमक यसको पूर्व उपस्थिति नष्ट हटाउन सजिलो अनुमति दिन्छ। यो गर्न, सुत्न जाँदै अघि परेलिहरु मा तेल लागू हुन्छ। निस्सन्देह, यो परिदृश्य मा तकिया र कम्बल मा तेल दाग छैन रोक्न सकिएला, तर सौन्दर्य ज्ञात छ, बलिदान आवश्यक छ। र यो मामला मा यो राम्रो ओछ्यान तन्ना एक सेट दान गर्न आफ्नै व्यक्ति छ, तर छैन।
यो प्रक्रिया देखि अधिकतम लाभ, burdock वा अरंडी तेल प्रयोग उठाउन गर्न। कृत्रिम परेलाहरु हटाउन सुविधा साथै यी पोसिलो उत्पादनहरु आफ्नै वृद्धि बढाउने र समग्र अवस्था सकारात्मक प्रभाव पार्न हुनेछ। साथै, तिनीहरूले उपलब्ध लगभग सबैतिर, कुनै पनि फार्मेसी जाने छन्। मूल्य पनि कडा आफ्नो वित्तीय राम्ररी जा असर छैन।
कसरी क्रीम को मद्दत संग घर मा lashes हटाउन
तेल को संस्करण तपाईं धेरै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने, तपाईँले अनुहार लागि कुनै पनि बोसो क्रीम को सट्टा प्रयोग गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभाव सिद्धान्त त्यस्तै हुनेछ, तर यो मामला मा एक कपास swab यसलाई लागू गर्न धेरै सावधान हुनुपर्छ। आखिर, यस्तो कस्मेटिक्स साधारण को परेलिहरु को नाजुक छाला मा प्रयोग को लागि अभिप्रेरित छैन।
साथै, राती परेलाहरु मा क्रीम छोडेर बिहान तपाईंलाई सजिलै आफ्नै देखि झूटा परेलाहरु पुल गर्न सक्नुहुन्छ। तर, पनि जोसिलो कार्यहरू वास्तवमा त्यो हात छैन मात्र Naroscheny तर पनि प्राकृतिक hairs सक्छ, यो प्रक्रिया संग धेरै होसियार हुनु।
कसरी debondera प्रयोग घर मा lashes हटाउन
को विजार्ड भने, तपाईं आफ्नो काम अतिरिक्त बलियो टास्ने संरचना प्रयोग lashes, उत्थान छन्, त्यसपछि विशुद्ध improvised हालतमा छैन। debonder - त्यहाँ एक विशेष उपकरण हो। यो संग, तपाईं सजिलै कष्टप्रद सौन्दर्य हटाउनेछ प्राप्त गर्न सक्छन्। तपाईं धेरै उच्च मूल्यहरु मा विशेषता पसलहरुमा यो खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। बबल सामान्यतया सानो रकम छ, तर तरल धेरै पटक लागि पर्याप्त हुनेछ।
Debonder एक कास्टिक रासायनिक स्थिरता छ यसलाई लागू गर्दा, त्यसैले धेरै सावधान र आँखा को श्लेम लाग्एको झिल्ली संग सम्पर्क जोगिन। यो उपकरण प्रयोग गरेर सामान्यतया छाला मा अप्रिय जलन सँगसँगै।
माथिको विधिहरू एकदम प्रभावी छ, तर केवल यो सैलून व्यावसायिक मा overbuilt थिए जो lashes, आउँदा। तपाईं अन्यथा आफ्नै आँखाको स्वास्थ्य जोखिम। साथै, सेवाको makeshift संस्करण संग घर मा lashes हटाउने, - प्रश्न टाढा सजिलो हो।
Burdock तेल दाढी: समीक्षा। आवेदन व्यञ्जनहरु
दांतेदार bangs वोग फिर्ता
"सुनको रेशम", बाल विकास एक प्रवर्तक: शैंपू को समीक्षा
Lashes घर कसरी निर्माण गर्न
"सर्पको मासु।" रोमाञ्चक जासूसको अभिनेता
जोखिम व्यवस्थापनका लागि एक उपकरण जस्तै उद्यम को आय र व्यय को विश्लेषण
"राष्ट्रपति-सेवा" दिमित्री Kryukov सीईओ: जीवनी र फोटो
किन तारा को सपना? सपना व्याख्या: सपनामा तारा शूटिंग
व्यक्ति को नाम Chakras र आफ्नो अर्थ
निर्माण मूल कुराहरु मा अनुमानित राशन र मूल्य निर्धारण
कसरी चिसो छत अन्तर्गत छतलाई ठीक तरिकाले इन्सुलेट गर्ने? चिसो छतको विशेषताहरू
बचत बैंक को समीक्षा: किन नकारात्मक धेरै?
जनावर मा मानिसहरूलाई को सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव: उदाहरणहरू
Novocherkassk Gres र Gres Yayvinskaya बर्बाद मा चलिरहेको